musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » misangano » Mwoyo weIMEX America Kudzidza Chirongwa
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • dzidzo • Hospitality Industry • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • ushanyi • USA Kuputsa Nhau
"Ino ndiyo nguva yekufungisisa zvese," anodaro Carina Bauer, CEO weImEX Group. "Isu takagara tichitenda kuti dhizaini yezviitiko hunyanzvi hwehunyanzvi muindasitiri yedu. Zvino zvakafanira kwatiri tese kuti tisimbise kupora kwechikamu chedu, nepasi rakapamhamha nenzira inogadzirisazve uye inogadzikana kune vese nekuisa hunyanzvi uhu. Takagadzira chirongwa chedzidzo chinounza kufunga kutsva kutenderera ramangwana rekusangana nemagadzirirwo ezviitiko pamwe nezvirongwa zvakatsaurirwa kugadziriro yechokwadi, kusiyana, hunhu uye tekinoroji pakati pemimwe misoro. ”
Chikwata cheIMEX chakafungazve nzira dzedzidzo gore rino.
Zvirongwa zvedzidzo zvinoratidzira zvazvino maindasitiri matambudziko uye zvakakosha.
Gore rino, inosvitsa Nyanzvi Yekuvandudza uye Kusimudzira, Kugadzira muKutaurirana, kusiyanisa, kuenzana, kuiswa uye kuwanika, Kugadzira uye Tech uye Kudzoreredza Kunangwa.
Iyo yemahara yekudzidza chirongwa pa IMEX America, inoitika munaNovember 9 - 11 muLas Vegas, inotangisa ne Smart Muvhuro, inofambiswa neMPI, munaNovember 8 uye inoenderera pamwe neakawanda emusangano, matafura anopisa misoro nemisangano mukati memazuva matatu ekuratidzira. Semazuva ese, iyo showo ichaisawo zuva nezuva MPI keynotes, zvizere ruzivo pano.
Chikwata cheIMEX chakafungazve nzira dzedzidzo gore rino, ichiunza Professional Development uye Upskilling, Kugadzira muKutaurirana, kusiyanisa, equity, kuiswa pamwe nekuwanika, Innovation neTekinoro uye Chinangwa Kudzoreredza kuratidza zviripo zvino zveindasitiri nezvinokoshesa.
Chiitiko Dhizaini kune Simba Vanhu & iyo Planet
In Dhizaina dhizaini yekugadzirisa zvine chinangwa, Mariela McIlwraith, Mutevedzeri weMutungamiri Sustainability uye Kufambira Mberi kweindasitiri kuEIC, inotsanangudza mabumbiro eSangano reKudzoreredza uye Zviitiko Zvinogadzirika zvinogona kubatsira kumisikidza simba rezviitiko kutyaira kupora kunoenderana nevanhu, nyika uye budiriro.
Kubatana muchiitiko dhizaini kunogara kumberi nepakati pe #EventCanvas: Mepu yako kumisangano inoshamisa. Roel Frissen naRuud Janssen, vagadziri ve #EventCanvas uye vanobatana navo muChiitiko Dhizaini Inobatanidzwa, vanoda kubatsira zvikwata kutarisa avo 'makuru mapikicha zvinangwa' uye kuunza huwandu hwakazara hwevatori vechikamu mukugadzira dhizaini.
Tingaite sei zviitiko zvine musoro zvinofambisa vateereri? Iyi ndiyo imwe yematambudziko akaitwa muChiitikoMB's Chiitiko Innovation Lab™. Chikwata ichi chichagovana chaiyo-yehupenyu mienzaniso yechiitiko dhizaini inoshandiswa kudhiraivha kuita pamwe nemaitiro akanakisa mubhajeti uye kuchengetedza mari kubva kutsigiro.
Sustainability inofanirwa kuverengerwa kubva pakutanga chaiko kwechiitiko dhizaini maitiro. Izvi zvinoenderana naCourtney Lohmann, Director Corporate Zvemagariro Evanhu paPRA. Chikamu chake Kuchengetedza ndiko kiyi kune yako chiitiko dhizaini inopokana yakasimba kesi yekusanganiswa kwakabatana kana uchiisa zvinangwa nezvinangwa.
Uchishandisa chiitiko dhizaini kuendesa 'inogadzirisazve shanduko' uye kudzidza kubva kune zvakasikwa kubatsira varipo kuve nehutano, hunofara uye hune chinangwa chiitiko chiitiko chakafukidzwa mu Remangwana ratiri kuda: Kuchenesa shanduko yekuvandudza. Vatsva kubva kubasa ravo paImEX's Regenerative Revolution uye neEnzvimbo yeNzvimbo mishumo, Guy Bigwood, Chief Changemaker kuGDS-Movement, naJanet Sperstad, weDhipatimendi Director kuMadison College, vachapa tsvagurudzo yavo ine hungwaru zvakadzama.
Ruoko Rwerubatsiro rweTekinoroji
Chiitiko chechiitiko chinogona kukwidziridzwa kuburikidza nehunyanzvi hwetekinoroji uye Maritz vanogovana zvavanodzidza pakutanga-ruoko mukati Kuvhiringidzika munguva yekudzoreredza: Maritz kudzoreredza chiitiko chechiitiko kuburikidza nehunyanzvi hwekugadzira. Aaron Dorsey, Senior Director Chigadzirwa Management uye Amy Kramer, Musika uye Chigadzirwa Innovation Leader, vanogovana zvidzidziso zvesangano ravo kubva padenda, matambudziko avakatarisana nawo, uye vatsva vanovhiringidza vavakafumura muhurukuro yemoto iyi.
AI tekinoroji inogona kutyaira vateereri kuita. AI inogona kubatsira… zvakanyanya ”. Michael achaendesa chikamu Kugadzirisa kuita sarudzo uye simba revanhu-centric AI.
Pamwe chete nedzidzo pane yekuratidzira pasi, vanoenda vanogona zvakare kuongorora IMEX America nzvimbo nyowani, Mandalay Bay, mune akateedzana eshanyo. Kusangana kwemazana ekushanya neMGM Resorts ipa kutarisa kwakasarudzika kumashure-kwe-zviitiko mashandiro eiyo nzvimbo yekutandarira uye yekokorodzano. Chikwata cheMGM pamwe neMeetGreen, EIC neGES, ichatorawo vatori vechikamu kuenda mugwenga reNevada kunoshanyira MGM Resort's Mega Solar Array sechikamu che Kuyera uye kugadzirisa chiitiko chekabhoni tsoka & Solar rondedzero yekushanya.
Tarisa IMEX's Zivo & Zviitiko Director, Dale Hudson, uye Senior Advocacy & Indasitiri Relations Advisor, Natasha Richards, vachikurukura chirongwa chakakura chehurukuro, matarenda matsva uye matsva ekuratidzira.
Iyo IMEX timu yakagadzirisazve chirongwa chayo chepamhepo chekudzidza uye mashandiro ekutsvaga. IMEXAmerica.com vashanyi vanogona ikozvino kutsvaga nemusoro wenyaya, fomati, keyword uye zuva pamwe nekushandisa mafirita. Endai Kunotsvaga Yedu Chiitiko Chirongwa.
IMEX America inoitika munaNovember 9 - 11 kuMandalay Bay muLas Vegas ine Smart Muvhuro, inofambiswa neMPI, munaNovember 8. Kunyoresa - mahara - tinya. pano. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve sarudzo dzekugara uye kubhuka, tinya pano. Yakakosha mwero kamuri mabhuroko achiri akavhurwa uye aripo.